Nei Dhijitari Asset Management iri Inokosha Chikamu muKushambadzira Technology Ecosystem | Martech Zone
Nei Dhijitari Asset Management iri yeChinhu Chakakosha muKushambadzira Technology Ecosystem
Chitatu, Nyamavhuvhu 27, 2014 Chitatu, October 28, 2020 Jenn Lisak Golding
Sevashambadziri, isu tinobata nemhando dzakasiyana dzezvishandiso uye zvinoshandiswa zuva nezuva. Kubva kushambadzira otomatiki kuenda kukutengesa kuteedzera kuemail kushambadza, isu tinoda maturusi aya kuti tiite mabasa edu zvinobudirira uye kubata / kuteedzera ese akasiyana emakampeni atakatuma.
Nekudaro, chidimbu chimwe chekushambadzira tekinoroji ecosystem iyo dzimwe nguva inofuratirwa ndiyo nzira yatinogadzirisa mafaira edu, kusanganisira midhiya, mifananidzo, zvinyorwa, vhidhiyo nezvimwe. Ngatizvitarisei; haugone kungova nefaira pakombuta yako kugadzirisa mapurojekiti zvakare. Unoda repakati repamusoro kuti timu yako iwane uye igovane mafaera anodikanwa uku uchiramba wakarongeka. Ndokusaka digitaalinen aseti manejimendi (DAM) ikozvino chakakosha chikamu cheiyo tekinoroji yekushambadzira ecosystem.
Kuwedzera, mupi weDAM ane zvakabatanidzwa, akagadzira iyi infographic yekuti nei DAM iri chinhu chinodiwa chekushambadzira tech ecosystem, ichiratidza nzira dzakasiyana idzo dzinofambisa mabasa edu sevatengesi zuva nezuva. Zvimwe zvinonakidza zvakawanikwa kubva kune infographic zvinosanganisira:
Vatengesi vanoronga ku wedzera mari yedhijitari yekushandisa zvemukati ne 57% muna 2014.
75% emakambani akaongororwa nzvimbo kusimbisa nzira dzekushambadzira dzemadhijitari seyakanyanya yepamusoro kushambadzira kwedhijitari.
71% yevatengesi vari parizvino uchishandisa Dhijitari Asset Management, uye 19% inoronga kushandisa DAM gore rino.
Tarisa uone infographic yavo uye dzidza zvakawanda nezve mashandisiro aungaita DAM kune rako bhizinesi.
Kuzivisa: Wedzera wakaita mutengi wesangano rangu.
Tags: content managementinonyanya kukoshadhamudigitaalinen aseti manejimendiyakagadzirirwa faira manejimendiinfographickushambadzira dhamukushambadzira tekinorojiwedzera